Igbo, Romans, Lesson 022 -- All Men are Corrupt and Blamable (Romans 3:9-20) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 022 (All Men are Corrupt)
3. Madu nile dum mebiri emebi na ebubo ụta (Ndi Rom 3:9-20)
NDI ROM 3:9-10
9 Gịnị zi? Ànyị ka ha mma? Ọbụghị ncha ncha. N'ihi na ayi ebuwo uzọ bo ndi-Ju na ndi-Grik ebubo na ha nile nọ n'okpuru nmehie. 10 Dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, Ọ dighi onye bu onye ezi omume, ọ dighi ma ọ bu.
Pol chịkọtara mkpesa ya megide ma ndị Juu ma ndị Jentaịl n'aha Chineke, wee gosi ha na ọ nweghị onye nwere mmasị ma ọ bụ uru karịa nke ọzọ. Niile emehiewo, mmehie ha dịkwa nkọ. Ha hapụrụ uzọ nke Chineke, wee bụrụ ndị ohu nke mmehie, na-ejide onwe ha n'ọchịchọ na aghụghọ nke onwe ha. Pol gụnyere onwe ya na mkpesa nke ya, na-ekwupụtara anyị na ya bụ onye mmehie.
Nwee hụtụla ihe jọgburu onwe ya nke mere na ị gbajuru gị anya? Mmehie gị jọgburu onwe ya nke na ọ na-eme ka mmụọ gị na mmụọ gị ghara ịma gị ụra. Jiri onwe gi tunye na mkpesa nke Pol, i gha amata na obu gi ka akowara ya na ya.
NDI ROM 3:11-12
11 Ọ dighi onye nāghọta; Ọ dighi onye nāchọ Chineke. 12 Ha niile ewezugawo onwe gị; ha nile abaghi uru n’efu; ọ dighi onye n ime ihe ọma, ọ dighi otu.
Anyị niile bụ ndị adịghị ọcha tupu ịdị ọcha nke Chineke. Ọ dighi onye ezi omume ma ọ bụghị Kraist. Anyị jupụtara n'oké ọhịa, anyị enweghịkwa ike ihu Chineke, bụ nnukwu ụkpụrụ anyị, dịka ọ dị. Anyị amaghị etu mmehie anyị si dị egwu. Ọ bụrụ na nanị ndị mmadụ ga-achọ otuto nke Chineke ka ha wee bụrụ ndị maara ihe! Ka osi di, onye obula n’uzo nke onwe ya, na-arapara n’ebube nke onwe ya, na-agu ochicho ya ma na-acho iru. Mmadu niile tufuru uzo nke Onyenwe ha, odighi onye na-eje ije n'uzo kwesiri ya. Adịghị mma n'omume gị. Ha nile ewezugawo onwe ha, bụrụ ndị na-abaghị uru ọ bụla, hie ụzọ. Anyị niile bụcha ndị ajọ omume, akọ na uche anyị makwaara anyị nke ọma.
NDI ROM 3:13
13 "Isi ha bụ ili ghere oghe, ha jiri ire ha na-eme aghụghọ"; "Nri nke asps dị n'okpuru egbugbere ọnụ ha".
Nrụrụ nke mmadụ pụtara n'asụsụ ha. Anyị niile bụ ndị na-egbu ọchụ na ndị na-egbu anụ, n'ihi na anyị na-akpata mbibi na mbibi nke aha, obi ụtọ, na udo nke ndị ọzọ; Anyị na-eji ụgha, ebubo, mkparị, na njakịrị na-eme ihere, emebi ikuku. anyị na-emekwa mkpesa megide ntụziaka nke Chineke. Mmegide anyị dị ka ekwulu ilu dị anyị n'ọnụ. Anyị na-enupụrụ ndụmọdụ nke Chineke isi, ma amaghị na anyị ekwesịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ oke ọnya na ikpe dị mkpa.
NDI ROM 3:14-17
14 "Nke ọnụ ha jupụtara n'ịbụ ọnụ na ilu."15 Uzọ-ha di ọsọ i tousi ọbara; 16 Nbibi na nkpab areu di n'uzọ-ha; 17 Uzọ udo ka ha nāmaghi.
Kpọasị anyị anaghị agbanwe ngwa ngwa, n'ihi na anyị anaghị amasị ndị iro anyị, mana anyị chọrọ ikpochapụ ndị isi ike. Ndi nile ndi nākpọ asì ha aru wupuru ọbara nke ọbara, n’ihi na madu, n’iwe-Ya, ghọrọ nke anumanu. Odighi udo di n’ime anyi, n’agbanyeghi okwu mkparita uka anyi nile banyere udo. Madu nile bu ndi-ob murdeu, ma obi-ha juputara n’ileda, nwepu onwe-ya, na mpako, n’ihi na ha amaghi na Chineke bu ihunanya, eziokwu na idi ocha. Ha tufuru uche nke eziokwu, na enweghịkwa ụkpụrụ ma ọ bụ izu ike, kama ha tinyere onwe ha n'ọnọdụ dị oke egwu.
NDI ROM 3:18
18 "Egwu Chineke adighi n'anya ha."
Ndi nile ndi nāmaghi Chineke, ha bu ndi nzuzu; Ọzọ, ndi nile nātu egwu ya, amam-ihe amaghi ihe: n'ihi na itu egwu Jehova bu nmalite amam-ihe, ihe-ọmuma nke Onye Nsọ bu kwa nghọta. Ekwenyeghi n’agha na - eto n’ihu n’ụbọchị ndị a, ma ụmụ nwoke na - akpa agwa dịka chi enweghị chi. O bu ihe iju anya na nmehie riri nne, we welie isi ya elu n’okporo uzo, n’ime akwukwo akuko, na n’ime obi!
NDI ROM 3:19-20
19 Ugbu a anyị matara na ihe ọbụla nke iwu kwuru, ọ na-agwa ndị nọ n'okpuru iwu, ka ọnụ wee jupụ, ma ụwa niile ga-abụ onye ikpe mara n'ihu Chineke. 20 Ya mere, site n’iwu nke iwu, emeghi ka onye ezi omume guzo n’ihu ya, n’ihi na n’iwu bu ihe omuma nke mmehie.
Onye nkwanye ugwu nke Chineke n'oge ochie bụ naanị ndị mmehie, n'ihi na Iwu ah O mere ka ha mata mmehie. Ọ bụ eziokwu na Iwu ahụ kwere anyị nkwa ngọzi niile nke elu-igwe ma ọ bụrụ na anyị debe iwu ndị ahụ, mana ọ nweghị onye nwere ike mezuo ọnọdụ a. Mgbe obula anyi nwara iwulite site n’olu nke aka anyi, ihe ojoo anyi na aputa n’obara. Anyị niile kwesịrị ntaramahụhụ Chineke, a na-emerụkwa ihe enyemaka anyị niile n'ihi ịchọ ọdịmma onwe anyị, anyị enweghịkwa ihu ọma Chineke. Gi kwenyere n'ụkpụrụ ndị a Pauline? Guo kwa ihe edere na Pol dere na inwere ike ibu ezi uche ma gbajiri gi.
EKPERE: Nna nke eluigwe, anyi n’ekele gị n’ihi na i mere ka anyị nwee nchekwube n’ime Kraịst na anyị nwere ike bụrụ ndị enweghị mmụọ ma ọ bụ nwee mmụọ. Anyị niile bụ ndị ọjọọ n’obi, asụsụ, aka, ụkwụ na anya; obi-ayi juputara na aghughọ, ikpọ-asì, agu-ugha na okwu-ugha. Abụ m onye ruru unyi! Gbaghara m mmehie m, ma kute ịdị nsọ gị n’iru m ka m wee gbajie arụ ọrụ nganga n’ime m, ka m wee fee naanị gị. Jehova, naputam nmehiem.
Kedu lee otú onyeozi ah mere mee ka mmehie ghota ka o wee mee ka mmebi iwu nke mmad niile d zuru ezu mmebi?
AJUJU - 1
Ebe imuta ihe anyi kwuru banyere akwukwo ozi nke Pol degaara ndi Rom na akwukwo a, ugbu a i nwere ike iza ajuju ndi a. Ọ bụrụ na ị zara 90% nke ajụjụ ndị a edepụtara n'okpuru, anyị ga-ezitere gị akụkụ na-esote usoro isiokwu a maka iwuli gị elu. Biko echefula itinye aha gị na adreesị gị n'ụzọ doro anya na mpempe akwụkwọ azịza.
Gini bu ihe kpatara na njedebe nke Akwukwo ozi diri ndi Rom?
Onye guzobere ụka dị na Rom?
Onye dere akwụkwọ ozi a? Ebee? Olee mgbe?
Uwe ndi dị a didaa ka Pọl jiri mee n'akwụkwọ ozi ya?
Gịnị bụ ndepụta nke akwụkwọ ozi a?
Gini bu aha ndi ahuru Pol n’onwe ya n’agha mbu nke akwukwo ozi ya?
Gini bu okwu nke na Kraist bu Okpara Chineke?
8 Gini bu amara, gini bu nzaghachi nke mmadu?
Nkwupụta dị a inaa nke bolla n'ụkpụrụ ndịozi ka ị na-ewere dị ka nke kachasị mkpa ma rụpụta ihe kachasị emetụta ya na ndụ gị?
Gini mere Pol ji kelee Chineke oge niile?
N'ụzọ dị a andaa, ọ̀ bụkwa ole ka Chineke gbochiri Pọl imezu nzube ya?
Nkwupụta dị n’amaokwu nke 16 ka ị tụlere dị ka nke kachasị mkpa? N'ihi gịnị?
Olee ihe jikọrọ ezi omume Chineke na okwukwe anyị?
Gini mere eji kpughee iwe nke Chineke?
Gini mere nwoke nke naenweghi Chineke gha aghaghi imere onwe ya chi nke uwa?
Gịnị si na ofufe na-ezighi ezi nke Chineke pụta?
Olee otú Pọl si gosipụta iwe nke oke iwe nke Chineke?
Gini bu mmehie ise nke edere banyere otutu nmehie, nke ị guru dika nke kariri n’uwa taa?
Kedụ ka mmadụ si ekpe onwe ya ikpe n’ihe ọ bụla o kpebiri n’ikpe onye ọzọ?
Gini bu ihe nzuzo ahu, nke Pọl kpughere anyi banyere ikpe nke Chineke?
Gini bu iwu Chineke na ikpe ikpe ikpe?
Kedụ ohere dị iche iche nke Iwu na ibu dịịrị ndị Juu?
Gini bu isi obibi ugwu ma na agba ohu?
Gịnị bụ ajụjụ ndị mbụ na-emegiderịta onwe ha n'akwụkwọ ozi nke a degaara ndị Rom, gịnịkwa bụ azịza ha?
Kedụ ka onyeozi ahụ si mee ka mmehie anyị doo anya iji mee ka nrụrụ aka nke mmadụ pụta?
Ọ bụrụ n’ị mezue ọmụmụ akwụkwọ nta niile nke usoro isiokwu a na ndị Rom ma zitere anyị azịza gị maka ajụjụ ndị a na-agwụ na akwụkwọ ọ bụla, anyị ga-ezitere gị
Akwụkwọ nke Ọmụmụ Di elu
na nghota leta nke Pọl degaara ndi Rom
dị ka agbamume maka ọrụ ị ga-arụ n'ọdịnihu maka Kraịst.\_\_ Anyị na-agba gị ume ka anyị mezue anyị nyocha nke Akwụkwọ Ozi nke Pọl nke ndị Rom ka ị wee nweta akụ ebighi-ebi. Anyị na-echere azịza gị ma na-ekpe ekpere maka gị. Adreesị anyị bụ:
Page last modified on January 26, 2021, at 06:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)